Apple Hutano Kudzidza Kunotanga kune Vakanyoreswa Apple Tarisa Vashandisi | Ndinobva mac
Isu takafungidzira iwe mandiri ndiri kuMac, kuti Apple yaigadzira kudzidza pamwe chete neStanford University. Iko kubatirana kunovavarira kudzidza hunhu hwemwoyo muvashandisi veApple Watch, vakasaina kuchirongwa ichi, vanoziva maitiro avo uye vanodzivirira matambudziko anogona kuitika.
Kana zviito zviitwe zvarongwa Apple pamwe neStanford UniversityKuti utore nhanho dzechidzidzo, ikozvino yave nguva yekuunganidza data. Iyo kambani iri kutumira zviziviso kuvaridzi veApple Watch zvakanangwa pachidzidzo ichi, kuti vazive kuti chirongwa ichi chiri kuitika.
Kana mushandisi agamuchira iyo ziviso, ivo vanopa mvumo yekugovana yavo data neApple kubva panguva iyoyo. Izvo zvinodiwa ndezvekutanga, kusanganisira kuratidza kuti kutaurirana kunenge kuri muChirungu. Pane ino nguva, vashandisi vane chimwe chirwere chemoyo senge atrial fibrillation uye atrial flutter havagone kutora chikamu muchidzidzo. Avo vanotora mishonga yekuonda-ropa, musadaro.
Ipapo Apple inotumira maemail mashoma. Ivo vanofungidzira chaiwo magwaro emvumo pane iyo ruzivo iyo ichagamuchirwa. Icho hachisi chinhu chinopfuura chimiro chaicho chemutemo wekuchengetedza data. Mune ino kesi, inodzorwa neHIPAA.
Chidzidzo, chinozivikanwa se Apple Mwoyo Kudzidza: kuongorora kwewristwatch-based photoplethysmography kuti uone moyo wemagetsi, yakaziviswa pakuratidzwa kweApple Watch Gunyana 3. Ndiyo imwezve sampuro yeApple yekuisa mashandisiro eApple Watch kutungamira mararamiro ane hutano. Ichi chiito chakabatanidzwa kune vamwe vakagadzirirwa nekambani, senge chirongwa chakarongerwa mwedzi uno waKukadzi.
Apple ichatora mukana wekushambadzira mamwe matekinoroji, nekuda kwedata rakapihwa nevashandisi:
Chidzidzo ichi chikamu chekuvandudzwa kwechinhu chitsva chekuferefeta uye imwe data kubva kuongororo inozoshandiswa kuendesa kune iyo FDA uye kutsvaga kupihwa mvumo yekushandisa zvimwe zvekuongorora
Hazvizivikanwe kana chishandiso chichagadziriswa neApple, neStanford University kana nehukama pakati pevaviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Hutano Kudzidza Kunotanga, kune Vakanyoresa Apple Watch Vashandisi
Vashandi veApple vanogona kutenga iyo HomePod ne50% dhisikaundi